लासका खातमाथि ओलीका झुठहरू – Health Post Nepal
२०७८ वैशाख २८ गते ११:३९
प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ गरेका केही दाबीलाई हेल्थपोस्टले चिरफार गरेको छ।
यथार्थ स् प्रधानमन्त्री ओलीले अवस्था ‘नियन्त्रणमै छ’ दाबी गर्नुभन्दा चौबिस घन्टा अघिमात्रै नेपालमा ९ हजार १ सय ९६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। ५० जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसअघि ५८ जनाको मृत्यु भएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अवस्था नियन्त्रणमै छ’ भनिरहँदा अस्पतालमा बेड नपाएर संक्रमितहरू आँगनमै सुतेका तस्बिरहरू भाइरल भइरहेका थिए। अक्सिजन नपाएर संक्रमितको मृत्यु भएका समाचारहरू ‘हेडलाइन’ बनिरहेका थिए। मृत्यु भएका संक्रमितलाई जलाउने ठाउँ नपुगेर पशुपतिको घाटमा चिता बनाउनका लागि डोजेरले खोस्रिरहेका दृश्यहरू आयोमेलले पनि प्रकाशित गरेको थियो। भलै, त्यसपछि प्रेस काउन्सिलले ‘कोरोना संक्रमित भएर मृत्यु भएकाहरूको सामूहिक दाहसंस्कार’ का तस्बिर र दृश्यहरू प्रकाशनरप्रशारण नगर्नू भनेर उर्दी जारी गर्‍यो।
यथार्थ स् लापरबाही नागरिकस्तरबाट मात्रै भएको थिएन। त्यो बेला उनकै पार्टीभित्र भाँडभैलो भइरहेको थियो। संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उनले संसद नै भंग गरिदिएका थिए। यद्यपि, दुई महिनापछि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई गैरसंवैधानिक भनिदियो र उनको त्यो निर्णय खारेज भयो। त्यही बेला उनको पार्टी (नेकपा) बाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपालको एउटा समूह अलग भयो।
एकले अर्कालाई देखाउनका लागि जिल्ला–जिल्लाबाट काठमाडौंमा मान्छे ओसार्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो। प्रधानमन्त्री आफैंले प्रचण्डहरूलाई भनेका थिए– ‘म उहाँहरूलाई भन्दिन चाहन्छु आमसभा कस्तो हुन्छ? आमसभा केलाई भनिन्छ? जनपरिचालन केलाई भनिन्छ भन्ने कुरा २३ गते हेर्नुहोला। हामी २३ गते अलिकति झलक दिन्छौं, कास्टिङ गर्छौं।’
नभन्दै उनले माघ २३ गते जिल्ला–जिल्लाबाट सयौं मान्छे काठमाडौं ल्याएर दरबारमार्गमा आमसभा गरे।
त्यतिबेला प्रचण्ड(माधव नेपाल पक्षले पनि काठमाडौंमा मान्छे ओसारेका थिए। उनीहरूले पनि ओलीको विरोधमा धेरैपटक काठमाडौं र देशभरि आमसभाहरू गरेका थिए। ओलीले पनि उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै देशभरि आमसभाहरू गरे।
प्रधानमन्त्रीको स्विकारोक्त्ति स् महामारी पूरै सकिएको थिएन। तर, ‘जनताले महामारी सकियो भन्ने ठाने’ भनेर प्रधानमन्त्रीले एउटा झुठ बोल्दाबोल्दै उनले यो भने स्विकार गरे– ‘राजनीतिक अवस्था बिग्रिएको थियो र ठुल्ठूला सभाजुलुस भएकै हुन्।’
उनले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्– ‘त्यो बेलाको अवस्था नै त्यस्तै थियो। देशमा केही राजनीतिक संकट थियो। र, त्यो बेला राजनीतिकरूपमा र अरू पक्षबाट पनि लापरबाही भयो। हामीले थोरै–थोरै गल्ती गर्‍यौं।
त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको अटेरी स् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वैशाखको पहिलो सातादेखि नै सावधानी अपनाउन चेतावनी दिइरहेको थियो। विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने सुझाव सिसिएमसीलाई दिएको थियो। तर, शिक्षा मन्त्रालयले मानिरहेको थिएन।
झुठो बोलेर सहयोगको अपिल स् अन्तर्वार्ताको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपिल पनि गरे। करिब सवा ६ मिनेटको त्यो अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले महामारी नियन्त्रणमा आइसक्यो भनेर झुठ बोले अनि अन्तिममा भने– ‘म हाम्रा छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो खतरनाक महामारीसँग जुध्नका लागि नेपाललाई सहयोग गर्नुहोस्।’
‘अघिल्ला साताको तुलनामा यो साता नेपालमा ९०.४ प्रतिशतले संक्रमण बढेको छ’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रेस व्रिफिङमा डा। विराजमान कर्माचार्यले भने ‘छिमेकी भारतलाई नै हेर्ने हो भने संक्रमित हुने दर त्यहाँ भन्दा नेपालमै बढी छ।’
डा। कर्माचार्य जनस्वास्थ्य तथा सामुदायिक कार्यक्रम विभाग धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक हुन्।